Ulwazi lovavanyo oluhlaziyiweyo- princetoncovid.org
Ulwazi lovavanyo oluhlaziyiweyo
Februwari 11, 2021
Iikiti zasimahla zokuhlola ekhaya ze-COVID-19 ziyafumaneka kubahlali baseMercer County abaneminyaka eli-14 nangaphezulu. Ubhaliso kwi-Intanethi Iyafuneka. Imeyile EkhayaTesting@mercercounty.org ngemibuzo.
Abahlali basePrinceton abafuna uvavanyo lwe-COVID kumntwana ongaphantsi kweminyaka eli-14 bayacetyiswa ukuba bajonge kugqirha wabantwana.
Ukwengeza, I-Santé eDityanisiweyo ekhemesti e-Nassau Street unikezela ngovavanyo lwe-COVID-200 yasimahla ngo-19 kusasa ukuya ku-10 emva kwemini ngoMvulo ukuya ngoLwesine. Cofa apha ukubhalisa. Uncedo luyafumaneka ngesiNgesi nangeSpanish ngokubiza (609) 921-8820.